Kooxdan oo ah hiilka keliya ee maanta garab taagan Fanka iyo masraxa soomaalida. Waa raxan ku hirgashay oo ku caan baxday isku duubnni, isu tanaasul, is gacan qabasho, is maqal iyo isu dhellitiranaan wiilal iyo gabdha ba.
Dhammaantoodna ah dhallinyaro mid waliba uu wato hibadiisa, halabuurkiisa, xirfadiisa, qoontiisa iyo kartidii uu ku fulin lahaa waajibaadka uu kooxda u hayo. Waa koox ka kooban qiyaas ahaan soddoneeyo qof oo isugu jira Abwaaniin, Fannaaniin, Mulaxamiin, Miyuusishanno Kaban iyo Biyaano ba tuma, Sawirqaadeyaal iyo Mus-danbeedyo. Oo ku dhisan kala qaadashada talooyinka iyo tusaalaha, intaas waxa dheer Sharci qoran oo si toos ah loogu dhaqmo lana ilaaliyo.
Caddayn uma baahna intaas oo la isu geeyey in ay ka soo baxayaan wax macno badan leh oo gudbiya fan dareenada bulsho ee kala duwan, wakhtiganna ay yihiin xiddigaha Geesku fannaaniinta ugu badan ee maanta haysata dhegaha ummadda iyo qof kasta oo ku abtirsada dunta soomaalinnimo, oo u dhashay Shanta Soomaaliyeed.
Maanta waxa ay doorteen markii saddexaad Guddoomiye hayn doona muddo xileedka sharcigu dhigayo. Hoggaanka kooxda ee cusub waxa ku guulaystay Abwaan Xasan Saleebaan Dhuxul (Laabsaalax) oo ah nin hanan kara xilkaas baallaadhan iyo nin
Sida aynu wada ognahay waa markii labaad ee loo doorto Xasan Guddoomiyennimada Kooxda. Waana nin aynu garan karnno hoggoomintiisa iyo maamulkiisa marka loo eego sidii milgaha iyo nidaamka lahayd iyo guulihii ay gaadhay kooxdu wakhtigiisii.
Laabsaalax waxa uu xilkan kala wareegay Miyuusishanka aad uga caanbaxay dunida ee Axmedwali Maxamuud Ibraahin (Furinle) oo si karaamo leh uga soo baxay xilkiisii, Kooxdana maamul ahaan gaadhsiiyey heer una soo hooyay guulo la taaban karo.
Axmedwali Furinle iyo Xasan Dhuxul ba waa laba nin oo ugu mudan tiirarka ay ku taagantahay Kooxdu.
Aan bogaadiyo Guddoomiyaha xilka wareejiyey ee Axmedwali, hambalyana u diro Guddoomiyaha cusub ee Xasan Dhuxul.
Oo marka laga yimaaddo Hibooyinkooda ummaddu wada garanyso.
Inta aan ka aqaanno labaduba ah niman isku darsaday Dabeecad wanaag, dadnnimo, deeqsinnimo, laabxaadhnnaan iyo dun qaaliya. Astaamahaas oo u sahlay in ay dadka cid walba ula dhaqmaan si gacaltooyo iyo walaaltinnimo ku dheehantahay.
Ugu danbayn Xiddigaha Geeska u biqimaayo oo waa Koox ka adag jiritaankeeda, haddii ay burburto waa Koox ka burburaysa qof kasta oo Soomaali ah, haddii ay sii jirtana waa Koox u joogta qof kasta oo Soomaali ah.
In ay inta hal qof oo soomaali ahi noolyahay dhisnaadaan oo taagnaadaan ayaan u rajaynayaa.
Sakariye Saxardiid Axmed (Awaare)